Afọ ole na ole gara aga, anyị na ụfọdụ ndị ụlọ ọrụ nwere nzukọ na Cisco site na Telepresence ma ọ bụghị ihe dị ịtụnanya. Gwa mmadụ okwu ihu na ihu ihu nwere uru dị egwu. Ndị nọ na Cisco kwenyere ma wepụta ihe omuma a na ike nke nzukọ mmadụ. Ihe ahịa ahịa a na-ekesa na-achọ agbanweela ụzọ ndị otu na-ekwurịta okwu na ndị ọrụ ibe ha, ndị na-ebu ngwaahịa / ndị mmekọ, na ndị ahịa nwere ike ikewa ogologo
Ndị otu ezi ndị enyi m, Jason, Bill, Carla na m nyara Cincinnati ụnyaahụ maka ihe ngosi I-Prize nke ikpeazụ anyị na Cisco. Facilitylọ ọrụ Carmel dị nso karị mana Cisco chọrọ ịkwaga anyị iji mee ka ndị Innovation ha zuru ezu nọrọ. Ọgwụgwụ! Site na ndenye aha mba ụwa karịa asọmpi 1100, ahọpụtara anyị ma mee 32 ọkara ikpeazụ. Ugbu a, anyị bụ otu n'ime echiche iri na abụọ ikpeazụ na-eweta n'ihu
Isbọchị edobere maka ngosi Cisco I-Prize ikpeazụ anyị. Jọ atụla m. Anyị chere na anyị ga-aga Chicago ma ọ bụ gafee Cincinnati, mana anyị chọpụtara n'abalị ụnyaahụ na enwere ọnọdụ Telepresence nke dị na Kamel! Teknụzụ na-eji nkọwa dị elu na Cisco arụ ọrụ iji mee ka ndị bịara ya dị ka a ga-asị na ị nọ n'otu ọnụ ụlọ ahụ. Nzukọ telepresence ga-eweta ihe karịrị otu ijeri dollar maka ego maka Cisco!